स्वदेश फर्कन विमानस्थल पुगेका २३६ कामदार नलिई फर्कियो नेपाल एयरलाइन्सको जहाज, श्रमिक एयरपोर्टमै अलपत्र — Raranews.com
रारान्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/५/३ गते
रोक्का र चौधरीजस्तै मंगलबार बिहानको उडान (उडान नं. आरए २२९२) बाट नेपाल फर्कन दुबई विमानस्थल पुगेका २३६ नेपाली श्रमिक अहिले अलपत्र परेका छन् । नेपाल फर्कने आसमा सबै सामान र कोठा छोडेर विमानस्थल पुगेका श्रमिकहरूको अब फर्कने ठाउँ पनि छैन । कतिपय श्रमिक लामो दूरी तय गरी दुबई विमानस्थल पुगेका छन् । अहिले आफूसँग खाने पैसासमेत नभएको उनीहरू बताउँछन् । निगमलाई दुबईको विमानस्थलमा आइसकेका यात्रु ल्याउन रोकेको सरकारले टर्किस एयरलाइन्समा युरोपका विभिन्न देशबाट आएका नेपाली यात्रुलाई भने आउन अनुमति दिएको छ । टर्किस एयरलाइन्स दुई सय एक यात्रु लिएर मंगलबार दिउँसो ४ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
निषेधाज्ञामा के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइदैन ?
पाँच महिनामा ५१ हजार भित्रिए, २१ हजार बाहिरिए